Moderna နဲ့ Pfizer ကာကွယ်ဆေး ဘယ်လောက် စိတ်ချရသလဲ
FILE - A woman holdsasmall bottle labeled witha"Coronavirus COVID-19 Vaccine" sticker andamedical syringe in front of displayed Pfizer logo in this illustration taken, Oct. 30, 2020.
Moderna နဲ့ Pfizer ကာကွယ်ဆေးတွေအတွက် စိတ်ချရမှုအတိုင်းအတာ ဘယ်လောက်ရှိတယ် ဆိုတာကို သိရဖို့ ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တဲ့ အဏုဇီဝဗေဒ ပညာရှင် မခင်ဇာဝင်းပြည့်ကို မေးမြန်းပြီး တင်ပြ ပေးထားပါတယ်။
Covid -19 အကူးစက်ခံရသူ သန်း ၇၀ နဲ့ သေဆုံးရသူ တသန်းခွဲကျော်လာချိန်မှာ ထိရောက်မှုရှိတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေ ရလာပါပြီ။ ဒီဆေးတွေအတွက် စိတ်ချရမှု အတိုင်းအတာ ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။ အဏုဇီဝဗေဒပညာရှင် မခင်ဇာဝင်းပြည့်ရဲ့ အမြင်ကို ကြည့်ရအောင်ပါ။
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“အမေရိကားက FDA ဆီမှာ ခွင့်ပြုမိန့် တောင်းထားတာက Moderna နဲ့ Pfizer ကုမ္ပဏီတွေပါ။ဒီဇင်ဘာထဲမှာ အခြေအနေ ဘယ်လိုလဲဆိုတာကို သိရမယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဆီက ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိစွာနဲ့ ဖွင့်ပြထားတဲ့ဟာမှာ သူတို့ရဲ့  အချက်အလက် Data မှာဆိုရင် တခုကတော့ (၉၅%) Efficacy ဆေးအာနိသင် ပြတယ်ဆိုတော့ ရောဂါကူးစက်မှု မခံရတော့ဘူးပေါ့။ နောက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတော့ (၉၄.၁%) ကာကွယ်မှုနှုန်း ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ ဒါက ကာကွယ်ဆေး standard တစ်ခုအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ရခဲ့တဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီိကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့  အာနိသင်က တော်တော်လေးကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလည်း မပြဘဲနဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတဲ့အတွက် စိတ်ချရတဲ့ ကာကွယ်ဆေးဆိုပြီး ပြောနိုင်ပါတယ်။”
မေး။. ။“ကာကွယ်ဆေးတခု ရဖို့ အဆင့်ပေါင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်ရတာကြောင့် အချိန်ပေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Covid-19 ကာကွယ်ဆေးကတော့ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာတွေကြောင့် တနှစ်မပြည့်ခင်မှာရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး တခုရဖို့ အတွက် ဘယ်လို အဆင့်တွေကို ကျော်ဖြတ်ရပါသလဲ။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“သမရိုးကျ ကာကွယ်ဆေးတွေမှာ ဆိုရင် ဒီကာကွယ်ဆေးဖြစ်လာဖို့ အတွက် အဆင့်ပေါင်းများစွာ လုပ်ရတယ်။ သတ္တဝါမဲ့ အဆင့်မှာ စမ်းရတယ်။ သတ္တဝါရှိအဆင့်မှာ စမ်းရတယ်။ ပြီးတော့မှ လူဆီကို ရောက်တယ်။ ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ ကာကွယ်ဆေးတခု ဖြစ်လာဖို့ အဆင့်ဆင့် စမ်းသပ်ရတာက နှစ်ကို ၅ နှစ် - ရ နှစ်ကနေ ၁၀ နှစ်။ အဲ့လောက် သွားတယ်။
အရင် Philadelphia ပြည်နယ်မှာတုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံအရဆိုရင် သူက သတ္တဝါမဲ့၊ သတ္တဝါရှိ အဆင့်တွေမှာ စမ်းသပ်မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ဘာလုပ်ရသလဲဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စ်ကို isolate လုပ်ရတယ်ဆိုတာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ခွဲထုတ်ပေးရတယ်။ သူ့ရဲ့  ဗိုင်းရပ်စ်ပုံစံလေး မပျက်ရအောင် ခွဲထုတ်ပေးရတယ်။ ဒီလိုခွဲထုတ်ဖို့ဆိုရင် ဒီဗိုင်းရပ်တစ်ခုလုံး အလုံးလေးတစ်လုံး မပျက်သွားအောင် Cell ထဲကို အရင်သွင်းရတယ်။ Cell ထဲမှာ အပွားခံရတယ်။ အပွားခံပြီးတော့မှ ပြန်ပြီးတော့ Cell ထဲက ပြန်ဖောက်ထွက်လာတဲ့ဟာကို ကျမတို့က Filter တွေနဲ့ အဆင့်ဆင့်ယူပြီးတော့ ခွဲထုတ်ပေးရတယ်။ ခွဲထုတ်ပြီးတော့မှ Minus 80 ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းထားပြီးမှ သတ္တဝါမဲ့စနစ်မှာ ပြန်စမ်းရတယ်။”
မေး။. ။“အခု ကာကွယ်ဆေးမှာ သုံးတဲ့နည်းက ဒီလို အဆင့်ပေါင်းများစွာ ကို ဖြတ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ဒီကာကွယ်ဆေးက တခြားကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ မတူတာက တော်တော်များများလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိကြမှာက mRNA ကို အခြေခံပြီး ထုတ်ကြတဲ့ ကာကွယ်ဆေးပါ။ Pfizer နဲ့ Moderna ထုတ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးနှစ်ခုစလုံးဟာ mRNA ကို အခြေခံပြီးတော့ ထုတ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေး။ mRNA အရှည်က messenger RNA - သူ့ရဲ့  မျိုးဗီဇအပွား - ဗိုင်းရပ်စ်က ရှိနေတဲ့ မျိုးဗီဇ RNA – genomic RNA ကနေ ပွားပြီးထုတ်ထားတဲ့ messenger RNA ပွားပြီး ထုတ်ထားတာ။ ဒီမျိုးဗီဇအပွားကို အခြေခံတဲ့ နည်းပညာက အရမ်းအဖိုးတန်တယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သူက အဲဒီစနစ် အဲဒီအခြေခံအဆင့်ဆင့်တစ်ခုလုံးကို အခုက မလိုတော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။
ဒီ mNRA တစ်ခုကို သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဒီ mNRA အပိုင်းလေးတစ်ခု ရသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာ ဒီကနေ သတ္တဝါမဲ့စနစ် Cell နဲ့ စမ်းတဲ့စနစ်ကို တန်းပြီးတော့ သွားလို့ရတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ပြန်ပြီးတော့ Isolated လုပ်ပေးရတယ်။ အဲဒီအဆင့်တွေမှာ Isolated လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်က လိုချင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ဟုတ်လားမဟုတ်လား ပြန်ပြီးတော့ Confirm လုပ်ရတယ်။ ဒီစနစ်တွေ အကုန်လုံး အဆင့်တွေအကုန်လုံးက မလိုတော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ ဒီစနစ်တွေကို အရင်ဆုံး Perfect ဖြစ်အောင် လုပ်ရတဲ့ဟာက နှစ်နဲ့ချီကြာတယ်။ အခု ဒီအပိုင်းကို ဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်။ mNRA တစ်ခုကို ယူလိုက်တယ်။ သတ္တဝါမဲ့စနစ်မှာ တန်းပြီးတော့ စမ်းလိုက်တယ်။
မေး။ ။“ ဘယ်လောက်အထိ အချိန် သက်သာသွားပါသလဲ”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“အချိန်က ဘယ်လောက်တို သွားသလဲဆိုရင် ဇန်နဝါရီလ (၉) ရက်နေ့မှာ တရုတ်ပြည်ကနေ ဒီမျိုးဗီဇကို အင်တာနက်ပေါ် တင်လိုက်တယ်။ အဲဒီမျိုးဗီဇ data – genetic sequence ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့  မျိုးဗီဇ data ကို အင်တာနက်ပေါ် တင်လိုက်တယ်။ ဇန်နဝါရီလ (၁၀) ရက်နေ့မှာ US က Dr. Fauci ရဲ့  အကြံပေးအဖွဲ့နဲ့ Moderna ကုမ္ပဏီနဲ့ တွေ့ဆုံတယ်။ ဆွေးနွေးကြတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို Experiment တွေ ဒီဇိုင်းဆွဲကြတယ်။ အစီအစဉ်ဆွဲပြီးတဲ့အခါကြတော့ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ Phase 1 အဆင့်တစ် စဖို့အတွက်ကို လုံလောက်တဲ့ Data ရသွားတယ်။ Phase-1 ဆိုတာ လူနဲ့စမ်းသပ်ဖို့ အဆင့်ဆင့်စမ်းသပ်ဖို့ ဆယ်ဂဏန်းနဲ့ စမ်းသပ်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ အချက်အလက် data တွေ ရသွားခဲ့တယ်။
အဲဒီကနေ လပိုင်းအတွင်းမှာ သူတို့က Phase-3 လူအမြောက်အမြားနဲ့ စမ်းသပ်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ data ရရှိသွားခဲ့တယ်။ Phase-3 ကို Moderna က စခဲ့တာက ဇူလိုင် (၂၇) ရက်နေ့မှာ စခဲ့တယ်။ ဇူလိုင် (၂၇) ရက်နေ့မှာ Phase-3 စခဲ့ပြီးတော့ သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာလလောက်မှာ သူတို့က စပြီးတော့ ပြီးနေပြီ။ ဒါက ဘယ်လိုအခြေအနေ ရှိနေပြီဆိုတာကို ပြောနိုင်ပြီ။ နိုဝင်ဘာမှာ သူတို့ သေချာတိကျတဲ့အခြေအနေ ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်း ဆိုတာတွေကို သူတို့ စပြီးတော့ ထုတ်လာတယ်။ နိုဝင်ဘာလ တတိယပတ်မှာ Moderna ဆိုရင် (၉၄.၁)% ကာကွယ်ပေးတယ်။ (၁၀၀)% ကာကွယ်ဆေး လက်ခံရရှိသောလူတွေသည် ရောဂါပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ကို မရောက်သွားတော့ဘူး။ သူတို့ နောက်ဆုံးပြောလိုက်တဲ့ ကြေညာနိုင်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်သွားပြီဆိုတော့ သူတို့က FDA ကို ခွင့်ပြုမိန့် တောင်းထားတာ ဖြစ်လာပါတယ်။”
မေး။. ။“လူပေါင်း သောင်းနဲ့ချီစမ်းသပ်ထားပြီး အတိုင်းအတာတခုအထိ စိတ်ချရတဲ့ အနေထားရောက်နေတဲ့ ဒီဆေးတွေကို ဖြန့်ဖြူးရာမှာ တွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲက ဆေးအာနိသင်ကို မထိခိုက်စေဖို့ အေးတဲ့နေရာမှာ ထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“ ကျမတို့ Lab ထဲမှာ စမ်းသပ်မှုအရဆိုရင်တော့ mRNA ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လို RNA ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ RNA ကို ထားသိုတဲ့ အပူချိန်က minus twenty or minus eighty (-20 or -80) မှာ ထားရတယ်။ သူက ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့ RNA မျိုးဗီဇအပွားလေးက အပူချိန် (၄) ဒီဂရီအထက်ဆိုရင် သူက ပျက်ဆီးသွားတယ်။ အခု ဒီနည်းပညာကလည်း RNA ကို အခြေခံပြီး လုပ်တဲ့နည်းပညာဖြစ်တော့ သူကို စမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ ကျမတို့က protocol အတိုင်းပဲ (၄) ဒီဂရီအောက်မှာ ထားရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥပမာ တခြားကုမ္ပဏီ Johnson & Johnson ကုမ္ပဏီဆိုရင် (၄) ဒီဂရီမှာ ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ (၄) ဒီဂရီမှာ ထားလို့ရတယ်လို့ ပြောတယ်။ Moderna ဆိုရင်တော့ စလုပ်ကတည်းက Minus 20 Celsius မှာ ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Minus twenty (-20) မှာ ထားရမယ်။ Pfizer ဆိုရင်တော့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကာလတလျှောက်လုံးမှာ Minus eighty (-80) Celsius ထားသိုခဲ့တဲ့အတွက် သူတိုိ့တွေရဲ့  ထားသိုရမယ့် အခြေအနေက Minus eighty ဖြစ်တယ်။
တခြားပူတဲ့အချိန်၊ အခြေအနေမှာ ထားလို့မရဘူးလားဆိုတာကတော့ ရလား၊ မရလား ဆိုတာကို ကျမတို့က လုံလောက်တဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေ မရှိသေးဘူး။ Set Protocol က ရှိနေပြီတဲ့အခါကြတော့ အပူချိန်ကို တိုးပြီးတော့ မစမ်းရသေးဘူး။ မစမ်းရသေးတဲ့အတွက် ဒါက (၄) ဒီဂရီမှာထားလို့ ရနိုင်တယ်ဆိုရင် (၄) ဒီဂရီမှာ ထားလို့ရတယ်ဆိုရင် သာမန်ရေခဲသေတ္တာ၊ ရေမခဲတဲ့အပိုင်း အောက်ဘက်ခြမ်းအကန့်က (၄) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ရှိတယ်။ အပေါ်ပိုင်းအကန့်သည် အအေးဆုံးအချိန်ကို ရောက်မယ်ဆိုရင် Minus twenty (-20) စင်တီဂရိတ်အထိ ထားနိုင်တယ်။ ကျမတို့ ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာ သုံးတဲ့အရာရဆိုရင် Minus twenty ကို နေရာမလောက်ရင် ရေခဲသေတ္တာအပေါ်ပိုင်းအကန့်မှာ အအေးဆုံးကို ရွှေ့ ပြီးတော့ ထားတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးအနေနဲ့ ပို့ဆောင်ပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။”
ဒီဆေးဟာ အပူချိန် မြင့်တက်မှုဒဏ် ဘယ်လောက်အထိ ခံနိုင်တယ်၊ ဒီဆေးကို ထိုးထားရင် ဘယ်လောက်တာရှည် ခံမယ်ဆိုတာအပါအဝင် ဒီဆေးအတွက် စမ်းသပ်မှုတွေဆက်လုပ်နေဆဲပဲ ဆိုတာကို တင်ပြရင်း ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
Covid -19 အကူးစကျခံရသူ သနျး ၇၀ နဲ့ သဆေုံးရသူ တသနျးခှဲကြျောလာခြိနျမှာ ထိရောကျမှုရှိတဲ့ ကာကှယျဆေးတှေ ရလာပါပွီ။ ဒီဆေးတှအေတှကျ စိတျခရြမှု အတိုငျးအတာ ဘယျလောကျရှိပါသလဲ။ အဏုဇီဝဗဒေပညာရှငျ မခငျဇာဝငျးပွညျ့ရဲ့ အမွငျကို ကွညျ့ရအောငျပါ။
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“အမရေိကားက FDA ဆီမှာ ခှငျ့ပွုမိနျ့ တောငျးထားတာက Moderna နဲ့ Pfizer ကုမ်ပဏီတှပေါ။ဒီဇငျဘာထဲမှာ အခွအေနေ ဘယျလိုလဲဆိုတာကို သိရမယျ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့ဆီက ပှငျ့လငျးမွငျသာမှု ရှိစှာနဲ့ ဖှငျ့ပွထားတဲ့ဟာမှာ သူတို့ရဲ့ အခကျြအလကျ Data မှာဆိုရငျ တခုကတော့ (၉၅%) Efficacy ဆေးအာနိသငျ ပွတယျဆိုတော့ ရောဂါကူးစကျမှု မခံရတော့ဘူးပေါ့။ နောကျကုမ်ပဏီတဈခုကတော့ (၉၄.၁%) ကာကှယျမှုနှုနျး ပေးနိုငျတယျဆိုတော့ ဒါက ကာကှယျဆေး standard တဈခုအနနေဲ့ ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ ရခဲ့တဲ့ ကာကှယျဆေးတှနေဲ့ ယှဉျကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ ဒီကာကှယျဆေးတှရေဲ့ အာနိသငျက တျောတျောလေးကို အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိတယျ။ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးလညျး မပွဘဲနဲ့ အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိတဲ့အတှကျ စိတျခရြတဲ့ ကာကှယျဆေးဆိုပွီး ပွောနိုငျပါတယျ။”
မေး။. ။“ကာကှယျဆေးတခု ရဖို့ အဆငျ့ပေါငျးမြားစှာကို ကြျောဖွတျရတာကွောငျ့ အခြိနျပေးရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီ Covid-19 ကာကှယျဆေးကတော့ တိုးတကျလာတဲ့ နညျးပညာတှကွေောငျ့ တနှဈမပွညျ့ခငျမှာရခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ကာကှယျဆေး တခုရဖို့ အတှကျ ဘယျလို အဆငျ့တှကေို ကြျောဖွတျရပါသလဲ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“သမရိုးကြ ကာကှယျဆေးတှမှော ဆိုရငျ ဒီကာကှယျဆေးဖွဈလာဖို့ အတှကျ အဆငျ့ပေါငျးမြားစှာ လုပျရတယျ။ သတ်တဝါမဲ့ အဆငျ့မှာ စမျးရတယျ။ သတ်တဝါရှိအဆငျ့မှာ စမျးရတယျ။ ပွီးတော့မှ လူဆီကို ရောကျတယျ။ ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ ကာကှယျဆေးတခု ဖွဈလာဖို့ အဆငျ့ဆငျ့ စမျးသပျရတာက နှဈကို ၅ နှဈ - ရ နှဈကနေ ၁၀ နှဈ။ အဲ့လောကျ သှားတယျ။
အရငျ Philadelphia ပွညျနယျမှာတုနျးက လုပျခဲ့တဲ့ အတှအေ့ကွုံအရဆိုရငျ သူက သတ်တဝါမဲ့၊ သတ်တဝါရှိ အဆငျ့တှမှော စမျးသပျမယျဆိုရငျ အရငျဆုံး ဘာလုပျရသလဲဆိုရငျ ဗိုငျးရပျဈကို isolate လုပျရတယျဆိုတာ ဗိုငျးရပျဈကို ခှဲထုတျပေးရတယျ။ သူ့ရဲ့ ဗိုငျးရပျဈပုံစံလေး မပကျြရအောငျ ခှဲထုတျပေးရတယျ။ ဒီလိုခှဲထုတျဖို့ဆိုရငျ ဒီဗိုငျးရပျတဈခုလုံး အလုံးလေးတဈလုံး မပကျြသှားအောငျ Cell ထဲကို အရငျသှငျးရတယျ။ Cell ထဲမှာ အပှားခံရတယျ။ အပှားခံပွီးတော့မှ ပွနျပွီးတော့ Cell ထဲက ပွနျဖောကျထှကျလာတဲ့ဟာကို ကမြတို့က Filter တှနေဲ့ အဆငျ့ဆငျ့ယူပွီးတော့ ခှဲထုတျပေးရတယျ။ ခှဲထုတျပွီးတော့မှ Minus 80 ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာ သိမျးထားပွီးမှ သတ်တဝါမဲ့စနဈမှာ ပွနျစမျးရတယျ။”
မေး။. ။“အခု ကာကှယျဆေးမှာ သုံးတဲ့နညျးက ဒီလို အဆငျ့ပေါငျးမြားစှာ ကို ဖွတျစရာမလိုတော့ပါဘူး။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ဒီကာကှယျဆေးက တခွားကာကှယျဆေးတှနေဲ့ မတူတာက တျောတျောမြားမြားလညျး မွနျမာနိုငျငံမှာ သိကွမှာက mRNA ကို အခွခေံပွီး ထုတျကွတဲ့ ကာကှယျဆေးပါ။ Pfizer နဲ့ Moderna ထုတျတဲ့ ကာကှယျဆေးနှဈခုစလုံးဟာ mRNA ကို အခွခေံပွီးတော့ ထုတျတဲ့ ကာကှယျဆေး။ mRNA အရှညျက messenger RNA - သူ့ရဲ့ မြိုးဗီဇအပှား - ဗိုငျးရပျဈက ရှိနတေဲ့ မြိုးဗီဇ RNA – genomic RNA ကနေ ပှားပွီးထုတျထားတဲ့ messenger RNA ပှားပွီး ထုတျထားတာ။ ဒီမြိုးဗီဇအပှားကို အခွခေံတဲ့ နညျးပညာက အရမျးအဖိုးတနျတယျ။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ သူက အဲဒီစနဈ အဲဒီအခွခေံအဆငျ့ဆငျ့တဈခုလုံးကို အခုက မလိုတော့ဘူး ဖွဈသှားတယျ။
ဒီ mNRA တဈခုကို သုံးလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ဒီ mNRA အပိုငျးလေးတဈခု ရသှားပွီဆိုတဲ့အခါမှာ ဒီကနေ သတ်တဝါမဲ့စနဈ Cell နဲ့ စမျးတဲ့စနဈကို တနျးပွီးတော့ သှားလို့ရတယျ။ ဗိုငျးရပျဈကို ပွနျပွီးတော့ Isolated လုပျပေးရတယျ။ အဲဒီအဆငျ့တှမှော Isolated လုပျခဲ့တဲ့ ဗိုငျးရပျဈက လိုခငျြတဲ့ ဗိုငျးရပျဈ ဟုတျလားမဟုတျလား ပွနျပွီးတော့ Confirm လုပျရတယျ။ ဒီစနဈတှေ အကုနျလုံး အဆငျ့တှအေကုနျလုံးက မလိုတော့ဘူး ဖွဈသှားတယျ။ မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ ဒီစနဈတှကေို အရငျဆုံး Perfect ဖွဈအောငျ လုပျရတဲ့ဟာက နှဈနဲ့ခြီကွာတယျ။ အခု ဒီအပိုငျးကို ဖယျထုတျလိုကျတယျ။ mNRA တဈခုကို ယူလိုကျတယျ။ သတ်တဝါမဲ့စနဈမှာ တနျးပွီးတော့ စမျးလိုကျတယျ။
မေး။ ။“ ဘယျလောကျအထိ အခြိနျ သကျသာသှားပါသလဲ”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“အခြိနျက ဘယျလောကျတို သှားသလဲဆိုရငျ ဇနျနဝါရီလ (၉) ရကျနမှေ့ာ တရုတျပွညျကနေ ဒီမြိုးဗီဇကို အငျတာနကျပျေါ တငျလိုကျတယျ။ အဲဒီမြိုးဗီဇ data – genetic sequence ဗိုငျးရပျဈရဲ့ မြိုးဗီဇ data ကို အငျတာနကျပျေါ တငျလိုကျတယျ။ ဇနျနဝါရီလ (၁၀) ရကျနမှေ့ာ US က Dr. Fauci ရဲ့ အကွံပေးအဖှဲ့နဲ့ Moderna ကုမ်ပဏီနဲ့ တှဆေုံ့တယျ။ ဆှေးနှေးကွတယျ။ ဘယျလိုလုပျမလဲဆိုတာကို Experiment တှေ ဒီဇိုငျးဆှဲကွတယျ။ အစီအစဉျဆှဲပွီးတဲ့အခါကွတော့ ရကျပိုငျးအတှငျးမှာ Phase 1 အဆငျ့တဈ စဖို့အတှကျကို လုံလောကျတဲ့ Data ရသှားတယျ။ Phase-1 ဆိုတာ လူနဲ့စမျးသပျဖို့ အဆငျ့ဆငျ့စမျးသပျဖို့ ဆယျဂဏနျးနဲ့ စမျးသပျဖို့အတှကျ လုံလောကျတဲ့ အခကျြအလကျ data တှေ ရသှားခဲ့တယျ။
အဲဒီကနေ လပိုငျးအတှငျးမှာ သူတို့က Phase-3 လူအမွောကျအမွားနဲ့ စမျးသပျဖို့အတှကျ လုံလောကျတဲ့ data ရရှိသှားခဲ့တယျ။ Phase-3 ကို Moderna က စခဲ့တာက ဇူလိုငျ (၂၇) ရကျနမှေ့ာ စခဲ့တယျ။ ဇူလိုငျ (၂၇) ရကျနမှေ့ာ Phase-3 စခဲ့ပွီးတော့ သွဂုတျ၊ စကျတငျဘာ၊ အောကျတိုဘာလလောကျမှာ သူတို့က စပွီးတော့ ပွီးနပွေီ။ ဒါက ဘယျလိုအခွအေနေ ရှိနပွေီဆိုတာကို ပွောနိုငျပွီ။ နိုဝငျဘာမှာ သူတို့ သခြောတိကတြဲ့အခွအေနေ ဘယျလောကျရာခိုငျနှုနျး ဆိုတာတှကေို သူတို့ စပွီးတော့ ထုတျလာတယျ။ နိုဝငျဘာလ တတိယပတျမှာ Moderna ဆိုရငျ (၉၄.၁)% ကာကှယျပေးတယျ။ (၁၀၀)% ကာကှယျဆေး လကျခံရရှိသောလူတှသေညျ ရောဂါပွငျးထနျတဲ့အဆငျ့ကို မရောကျသှားတော့ဘူး။ သူတို့ နောကျဆုံးပွောလိုကျတဲ့ ကွညောနိုငျတဲ့အဆငျ့ကို ရောကျသှားပွီဆိုတော့ သူတို့က FDA ကို ခှငျ့ပွုမိနျ့ တောငျးထားတာ ဖွဈလာပါတယျ။”
မေး။. ။“လူပေါငျး သောငျးနဲ့ခြီစမျးသပျထားပွီး အတိုငျးအတာတခုအထိ စိတျခရြတဲ့ အနထေားရောကျနတေဲ့ ဒီဆေးတှကေို ဖွနျ့ဖွူးရာမှာ တှရေ့တဲ့ အခကျအခဲက ဆေးအာနိသငျကို မထိခိုကျစဖေို့ အေးတဲ့နရောမှာ ထားရတာ ဖွဈပါတယျ။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“ ကမြတို့ Lab ထဲမှာ စမျးသပျမှုအရဆိုရငျတော့ mRNA ပဲဖွဈဖွဈ၊ ဘယျလို RNA ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ RNA ကို ထားသိုတဲ့ အပူခြိနျက minus twenty or minus eighty (-20 or -80) မှာ ထားရတယျ။ သူက ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ သူ့ RNA မြိုးဗီဇအပှားလေးက အပူခြိနျ (၄) ဒီဂရီအထကျဆိုရငျ သူက ပကျြဆီးသှားတယျ။ အခု ဒီနညျးပညာကလညျး RNA ကို အခွခေံပွီး လုပျတဲ့နညျးပညာဖွဈတော့ သူကို စမျးနတေဲ့အခြိနျမှာ ကမြတို့က protocol အတိုငျးပဲ (၄) ဒီဂရီအောကျမှာ ထားရတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဥပမာ တခွားကုမ်ပဏီ Johnson & Johnson ကုမ်ပဏီဆိုရငျ (၄) ဒီဂရီမှာ ထားတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့ (၄) ဒီဂရီမှာ ထားလို့ရတယျလို့ ပွောတယျ။ Moderna ဆိုရငျတော့ စလုပျကတညျးက Minus 20 Celsius မှာ ထားတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့ Minus twenty (-20) မှာ ထားရမယျ။ Pfizer ဆိုရငျတော့ လုပျဆောငျနတေဲ့ ကာလတလြှောကျလုံးမှာ Minus eighty (-80) Celsius ထားသိုခဲ့တဲ့အတှကျ သူတို့တှရေဲ့ ထားသိုရမယျ့ အခွအေနကေ Minus eighty ဖွဈတယျ။
တခွားပူတဲ့အခြိနျ၊ အခွအေနမှော ထားလို့မရဘူးလားဆိုတာကတော့ ရလား၊ မရလား ဆိုတာကို ကမြတို့က လုံလောကျတဲ့ စမျးသပျမှုတှေ မရှိသေးဘူး။ Set Protocol က ရှိနပွေီတဲ့အခါကွတော့ အပူခြိနျကို တိုးပွီးတော့ မစမျးရသေးဘူး။ မစမျးရသေးတဲ့အတှကျ ဒါက (၄) ဒီဂရီမှာထားလို့ ရနိုငျတယျဆိုရငျ (၄) ဒီဂရီမှာ ထားလို့ရတယျဆိုရငျ သာမနျရခေဲသတ်ေတာ၊ ရမေခဲတဲ့အပိုငျး အောကျဘကျခွမျးအကနျ့က (၄) ဒီဂရီ စငျတီဂရိတျ ရှိတယျ။ အပျေါပိုငျးအကနျ့သညျ အအေးဆုံးအခြိနျကို ရောကျမယျဆိုရငျ Minus twenty (-20) စငျတီဂရိတျအထိ ထားနိုငျတယျ။ ကမြတို့ ဓါတျခှဲခနျးထဲမှာ သုံးတဲ့အရာရဆိုရငျ Minus twenty ကို နရောမလောကျရငျ ရခေဲသတ်ေတာအပျေါပိုငျးအကနျ့မှာ အအေးဆုံးကို ရှပွေီ့းတော့ ထားတယျ။ အဲဒီလိုမြိုးအနနေဲ့ ပို့ဆောငျပွီး သုံးလို့ရပါတယျ။”
ဒီဆေးဟာ အပူခြိနျ မွငျ့တကျမှုဒဏျ ဘယျလောကျအထိ ခံနိုငျတယျ၊ ဒီဆေးကို ထိုးထားရငျ ဘယျလောကျတာရှညျ ခံမယျဆိုတာအပါအဝငျ ဒီဆေးအတှကျ စမျးသပျမှုတှဆေကျလုပျနဆေဲပဲ ဆိုတာကို တငျပွရငျး ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပံနဲ့နညျးပညာကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။